पीपीएलका लागि खेलाडी दर्ता शुरु Letzcricket - Cricket News Articles From Around the Globe
पीपीएलका लागि खेलाडी दर्ता शुरु
19th September 2018, Wednesday
आगामी कार्तिक दोस्रो साता सुन्दर पर्यटकीय नगर पोखरामा आयोजना हुन गइरहेको पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) टी२० क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि खेलाडी दर्ता शुरु भएको छ । आयोजक क्विन्स इभेन्ट्स प्रा. लि. ले आज बुधबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सो जानकारी गराएको हो ।
पीपीएलमा खेल्न इच्छुक खेलाडीले पीपीएलको आधिकारिक वेव पोर्टल www.ppl-t20.com मा लग इन गरेर आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्नेछन् । दर्ता शुल्क १ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ जुन शुल्क इसेवा मार्फत तिर्न सकिनेछ ।
पीपीएलमा सहभागी हुने खेलाडीलाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ ।
क्याप्ड सिनियर (Capped Senior)
क्याप्ड एज लेभल (Capped Age Level)
क्याप्ड सिनियरमा नेपालको सिनियर टिमबाट प्रतिनिधित्व गरेका खेलाडीलाई राखिएको छ । क्याप्ड एज लेभलमा नेपालको उमेर समूह यू१५, यु१७, यु१९, यु२१ तथा यु२३ टिमको प्रतिनिधित्व गरेका खेलाडिलाई राखिएको छ । अनक्याप्ड श्रेणीमा नेपालको राष्टिय र मेर समूहको टिमबाट खेलेका बाहेकका खेलाडीलाई राखिएको छ ।
क्याप्ड सिनियर खेलाडीको न्युनतम मूल्य (बेस प्राइस) ५० हजार रुपैँया राखिएको छ भने अधिकतम मूल्य २ लाख ५० हजार रुपैँया राखिएको छ । क्याप्ड ऐज लेभलको न्यूनतम मूल्य पनि ५० हजार राखिएको छ भने अधिकतम मूल्य १ लाख ५० हजार निर्धारण गरिएको छ । अनक्याप्ड श्रेणीको न्यूनतम मूल्य ३० हजार र अधिकतम मूल्य १ लाख रुपैँया राखिएको छ ।पीपीएलका लागि एक टिमले न्यूनतम १५ खेलाडी र अधिकतम १८ खेलाडी आबद्ध गर्नु पर्नेछ । अक्सनबाट न्यूनतम १० खेलाडी आवद्ध गर्नुपर्नेछ । हरेक टिमले १ मार्की खेलाडी, २ जना विदेशी खेलाडी र २ जना लोकल आइकन प्लेयरलाई पनि राख्नु पर्नेछ ।
पीपीएलमा दर्ता गराउने खेलाडीले आफ्नो क्याटागोरी अनुसार न्यूनतम मूल्य बढाएर पनि आफ्नो मूल्य तोक्न पाउनेछन् । उदाहरणका लागि क्याप्ड सिनियरले दर्ता गराउँदा आफ्नो न्यूनतम मूल्य ५० हजार भन्दा बढी राख्न पाउनेछन् । आफ्नो मूल्य बढाएर दर्ता गर्नका लागि पीपीएलको बेभ पोर्टलमा छुट्टै अप्सनको व्यवस्था गरिएको छ । खेलाडी दर्ता २५ सेप्टेम्बर (असोज ९ गते) राति १२ बजेसम्म गराइसक्नु पर्नेछ ।